(Sawirro)Wariyayaasha gobolka Mudug oo maanta ka shiray xeer ay sheegtay dawladda Soomaaliya inay ku dhaqayso saxaafadda – Radio Daljir
(Sawirro)Wariyayaasha gobolka Mudug oo maanta ka shiray xeer ay sheegtay dawladda Soomaaliya inay ku dhaqayso saxaafadda
Febraayo 27, 2013 6:56 b 0
Gaalkacyo, Feb 27- Wariyayaasha gobolka Mudug oo maanta kulan ballaaran ku yeeshay magaalada Gaalkacyo ayaa gabi ahaanba ka soo horjeestay xeer ay sheegtay dawladda Federaalka? Soomaaliya inay kula dhaqmayso warbaahinta iyo wariyayaasha madaxa bannaan.
Kulankan maanta saxafiyiintu ay ku yeesheen xarunta radio Gaalkacyo ayaa si qoto dheer waxaa ay isula ifiyeen xeerkaasi oo ay ku tilmaameen mid aysan u hogaansami karin oo ka soo horjeeda nidaamka saxaafadda caalamigaa iyo kan madanigaa ee Soomaalida.
Suxufiyiinta oo fikiro kala duwan isdhaafsaday ayaa gabagabadii waxay iska dhex doorteen guddi uruuriya fikirka saxafiyiinta iyo bayaanka ay ka soo saarayaan.
C/risaaq Cali Cabdi (Silver) oo ka mida abaabulayaasha kulankaasi oo hadal kooban jeediyay ayaa tilmaamay inaysan jirin cid kala soo tashatay xeerkaasi, isla markaana uu ula muuqdo mid ay ku jiraan qodobo fara badan oo aanan u danaynayn wariyayaasha Soomaaliyeed ee ku shaqaynaya marxladan culus ee dalku uu ku jiro.
Faadumo Axmed Gaashaan ayaa iyaduna dhankeeda waxaa ay sheegtay inaysan u cuntamin qodobada ku jira xeerka wasaaradda warfaafinta ay sheegtay inay ku dhaqaysay xirfadlayda warbaahinta lagana filayo inuu saxiixo m/weynaha si loo dhaqan galiyo, Faadumo ayaa carabka ku dhufatay inaysan marna qaadan doonin xeerkaasi.
Kulanka saxafiyiinta gobolka Mudug ay kaga biyo diidsan yihiin xeer saxaafadeed soo baxay xiligii dawladihii kumeel gaarka ahaa ee Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xili sidoo kale dalka meelo ka mida ay ka socdaan shirar hoose oo warfidiyeenadu ay ka yeelanayaan arimahaas.
Naga fisha sawirada goor dhaw
Sawiro,Waxgaradka gobolka Nugaal oo soo saaray baaq ay uga soo horjeedaan Al shabaab
Nin mayd ah oo laga helay koonfurta magaalada Garoowe